सप्तकोशी पुल नजिक लाश, ६ जनाको…. दुनियाँकै आँशु, बगायो हेर्नुहाेस – Jagaran Nepal
सप्तकोशी पुल नजिक लाश, ६ जनाको…. दुनियाँकै आँशु, बगायो हेर्नुहाेस
काठमाडौ । कुनैदिन यस्तो दुखद हुन्छ की जसले दुनियाँकै आँशु रोक्न दिँदैन । आज नेपालमा यस्तै भएको छ । एकैदिन त्योपनि प्राकृतिक विपत्ति चट्याङ लागेर ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सप्तरीमा ४ जना र मकवानपुरमा २ जना गरी आज चट्याङले ६ जनाले ज्यान गुमाए । वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर आज ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सप्तकोशी नदीमा बिहान नुहाउन जाँदा दुनियाँकै आँशु बग्ने दृष्य देखियो । जहाँ ४ वटा लाश लडिरहेका थिए । कोशी पुल नजिक चट्याङ लागेर महदेवा गाउँपालिका–२ का ६० वर्षीय छेदी ठाकुर र २७ वर्षीय बेचन यादव मृत्यु भएको थियो ।
यसैगरी खेतमा धान रोप्न गएको बेला चट्याङ लागेर डाक्नेश्वरी नगरपालिका–९ लछनपटीका ३० वर्षीया ललितादेवी यादव र राजगढ गाउँपालिका बेल्ही चपेनका ४५ वर्षीय केसी साहकोपनि आज नै मृत्यु भएको सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक तिलक भारतीले बताउनुभयो । राजगढ गाउँपालिका बेल्ही चपेनामा आफनो आँगंनमा काम गरिरहेको अवस्थामा १८ वर्षीया आशा मण्डल चट्याङ लागेर घाइते भएकी छिन् । उनलाई उपचारका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आज यति मात्र दुखद घटनाले टरेन अविरल वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर मकवानपुरमा अरु दुई जना महिलाकोपनि मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मकवानपुर बकैया गाउँपालिका–२ का बुद्ध घिसिङको १७ वर्षीया छोरी सम्झना घिसिङ र आशालाल घिसिङकी २५ वर्षीया श्रीमती विना घिसिङको रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सम्झाना घरमै बसिरहेको अवस्थामा र विनाको स्थानीय दोभान स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै स्थानीय पूर्णबहादुर जिम्बाको घाइते १४ वर्षीय छोरा किरण जिम्बाको सो स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको छ । अविरल वर्षाले तरकारी बालिमा असर पारेको स्थानीय किसानको गुनासो छ । आज सप्तरीमा चार र मकवानपुरमा २ जना गरी चट्याङकै कारण ६ जनाको मृत्यु भयो । यो एकैदिन चट्याङबाट भएको मानवीय क्षति अहिलेसम्मकै ठूलो हो ।